गोप्य मतदानको बाधक प्रहरी नै ! | KTM Khabar
गोप्य मतदानको बाधक प्रहरी नै !
२०७४ मंसिर १ गते ०८:३८ मा प्रकाशित
गोप्य मतदानबाट जनप्रतिनिधि चुनिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। मतदाता पनि आफैंले मतदान गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरे सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आफूले गरेको मतदानको तस्बिर बाहिर नल्याउन भनेरै मतदान केन्द्रमा मोबाइलसमेत निषेध गरिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका उपाध्यक्ष कपिल श्रेष्ठ मतदान केन्द्रभित्र हतियारधारी प्रहरीको उपस्थितिलाई पुरानै पञ्चायती संस्कार भन्छन्। ‘अधिकांश स्थानमा मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउने स्थानमा मतपेटिकासँगै बन्दुक ताकेर प्रहरी उभिएको देखियो,’ उनले भने, ‘कसले कसलाई भोट गरेको छ, सुरक्षाकर्मीले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यो सरासर गलत हो।’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले मतदान केन्द्रमा हतियारधारी प्रहरी नराख्न धेरै पटक आयोगलाई सुझाइसकेको उनले बताए।